Mee ma ọ bụ Zụrụ? Idozi Nsogbu Azụmahịa na Sọftụwia Ziri Ezi | Martech Zone
Mee ma ọ bụ Zụrụ? Idozi Nsogbu Azụmaahịa na Software Dị Mma
Fraịde, Ọgọstụ 14, 2020 Fraịde, Ọgọstụ 14, 2020 Jenn Lisak Golding
Nsogbu azụmaahịa ahụ ma ọ bụ ebumnuche arụmọrụ nke na-agwụ gị ike n'oge na-adịbeghị anya? Ohere inweta bụ ihe ngwọta ya na teknụzụ. Dika ihe choro na oge gi, mmefu ego na mmekorita gi, nke g’enweta ohere iburu ndi ozo agha n’emebi isi akpaaka.
Mgbanwe na omume onye na-azụ ahịa na-achọ akpaaka
Maraworị na akpaaka bụ ihe na-enweghị atụ n'ihe banyere arụmọrụ: obere njehie, ụgwọ, igbu oge, na ọrụ aka. Dị nnọọ ka ọ dị mkpa, ọ bụ ihe ndị ahịa na-atụ anya ugbu a. Omume dijitalụ anyị jikọtara ọnụ, nke Facebook, Google, Netflix na Amazon mebiri, pụtara ndị na-azụ ahịa ugbu a na-achọ otu ọkwa nke onwe, ọsọ ọsọ na afọ ojuju, ndị na-akwụghachi ụgwọ na-enye ụdị ahụmịhe ahụ, na ịhapụ ndị na-ere ahịa na-adịghị.
Mgbanwe omume ahụ abụghị ihe a ga-eji gwurie egwu: Ahụmịhe ndị ahịa na - agbanwe ugbu a ịzụta mkpebi karịa ọnụahịa, ọnụahịa, arụmọrụ ma ọ bụ njirimara ndị ọzọ, ndị na - eme nchọpụta kwuru.
Maka azụmahịa, nke a sụgharịrị ịbụ ihe mgbu na-arịwanye elu kamakwa nnukwu ohere iji karịa ndị asọmpi: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ atọ n'ime mmadụ anọ na-azụ ahịa na-ekwu na ijikwa ọrụ ha bụ nnukwu nsogbu haMmeri Ndị Ahịa), na azụmaahịa na-efunahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 11,000 kwa afọ, kwa onye ọrụ, n'ihi nkwukọrịta na mmekorita (Ekwentị m).
Ka a sịkwa ihe mere: Ndị ọrụ na-akọ na ha jiri 50% nke oge ha na-eji aka achọ akwụkwọ, na-ewe 18 nkeji kwa akwụkwọ (M-faịlụ). Ọnụọgụ ahụ na-arịgo 68.6% mgbe ị gbakwunye nkwukọrịta na ọrụ mmekorita (Amamịghe nke CIO).
Ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịhụ uru nke akpaaka, itinye ya n'ọrụ adịghị oke mma. Ikwesiri iwulite azịza omenala? Buyzụta ihe na-abụghị shelf? Tweak a prepackaged ngwọta? Ndị ahụ nwere ike ịbụ nke ịme anwansi na mkpebi siri ike.
Gbaa mbọ hụ na itinye ego na teknụzụ gị bara uru
Mkpebi ahụ, hemming na hawing nke na-abịa na ịhọrọ teknụzụ ziri ezi gbadara na nke a: Kedu ngwọta agaghị egbusi oge m na dollar?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ihe na-ekewa anya iji teknụzụ bara uru na nke ndị ogbenye bụ nke a: Teknụzụ bara uru na-edozi ezigbo azụmaahịa na ahụmịhe ndị ahịa, na-akọwa. Ogwe-oghere.
Nsogbu ndị ahụ gụnyere:
Mpempe akwụkwọ dị iche iche
Na-egbu oge na nnyefe ọrụ
Ihe omume abụọ
Mkpebi ndị na-adịghị mma
Enweghị ahaziri ma ọ bụ mkpa
Okwu dị mma
Nghọta sitere n'eziokwu
Ọtụtụ igba iji wụfee maka ọrụ ma ọ bụ azịza dị mfe
Na-efu, data na-agbagwoju anya ma ọ bụ nke na-adịghị mma, na ndị ọzọ.
Gịnị banyere oge ndị ahụ mgbe ngwá ọrụ teknụzụ rụpụtara ihe dị njọ? 'Ve nọ ebe ahụ: Malfunctions, irrelevancy ma ọ bụ nsogbu ndị a na-atụghị anya ya na-eduga ndị ọrụ ime mkpesa, hapụ ngwá ọrụ ahụ, ma laghachi n'ụzọ ochie nke ime ihe. Olee otu ị ga-esi mee ka nke ahụ ghara ime?
Ọ na - apụta na ị nwere ike ibu amụma nke teknụzụ ga - ejedebe na - ejighị ya ma ọ bụ lelee ya dị ka ibu site na njirimara abụọ ọdịda:
Nzukọ ahụ ewepụtaghị oge iji ghọta nsogbu nke teknụzụ pụtara iji dozie yana nsogbu nke nsogbu ahụ.
Ndị ọrụ anaghị aghọta etu iji ngwọta a ga-esi belata ọrụ ha ma ọ bụ ndụ ndị ahịa.
Dezie nlekọta ndị ahụ ma ị mela ka ohere ịga nke ọma gị ba ụba.
Nhọrọ 3 + Nzọụkwụ 3
Ka ị na-atụle nsogbu ị na-agba mbọ idozi, i nwere nhọrọ atọ:
Mee ngwa ngwanrọ (ma ọ bụ hazie usoro dị adị)
Zụta ihe na-adịghị na shelf
Emela ihe ọbụla
Nzọụkwụ atọ kwesịrị iduzi mkpebi gị:
Amata nsogbu ị chọrọ software dozie
Nyochaa usoro ndị dị ugbu a
Ghọta ego na akụnụba
Kedu nhọrọ kachasị mma maka ọnọdụ gị?
Bob Baird, onye guzobere Ogwe-oghere, Indianapolis dabeere na omenala software mmepe ike, mgbari ihe ọ mụtara site n'inyere òtù aka ịkọwa ihe ngwọta ngwanrọ kachasị mma ha:
Ihe Mere eji ewu
Ndị ọrụ gị na-eji ezigbo oge etinye aka na data ha.
Azụmaahịa gị nwere mkpa pụrụ iche.
Have nwere sistemụ abụọ ma ọ bụ karịa dabara na mkpa gị, mana ị ga-achọ ijikọ ha.
Omenala software ga-enye gị a asọmpi uru.
Chọghị imeghari arụmọrụ iji kwekọọ na ngwanrọ.
Ihe ndi choro gi bu ndi anahu anya ugbua.
Dị njikere imezigharị ọrụ azụmahịa iji kwekọọ na ngwanrọ.
Ntinye ego kwa ọnwa gị erughị $ 1,500 maka ngwanrọ.
Ikwesiri ime ngwa oru ohuru.
Ihe Mere Ghara Ime Ihe Ọ bụla
Ndị ọrụ ugbu a na-eji obere oge ma ọ bụ oge ọ bụla na usoro akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ abụọ.
Do naghị ezube ịzụlite azụmaahịa gị n'ime afọ ole na ole sochirinụ.
Njehie, igbu oge, nkwukọrịta okwu ma ọ bụ mmachi dị adị adịghị na azụmahịa gị.
A na-ahazi usoro ọrụ ugbu a, ntụgharị na arụmọrụ arụmọrụ maka azụmaahịa gị ugbu a na n'ọdịnihu.
Dabere na Nhazi?
Bob na-ekwu ihe ole na ole maka mmepe sọftụwia omenala:
Etinyela na ndepụta atụmatụ. Gbado anya na ịghọta nsogbu ndị ị chọrọ idozi. N'adịghị ka isi mgbo aka na azụ nke nkwakọ ngwaahịa ngwanrọ, echiche mbụ gị banyere imepụta ihe zuru oke nwere ike imehie.
Nhazi ka aghaghi ibu ihe obula. Ọ bụrụ na ị hụrụ akụkụ dị iche iche nke ihe ngwọta dị adị mana ịchọrọ ịhazi akụkụ ya, mara na ọtụtụ ngwanrọ etinyegoro na mbụ nwere ike ịmegharị site na API.
Iwuli software na-achọ ihe n'ihu ọnụ na-eri. Ọ bụchaghị a elu-eri; ị ga-akwụ ụgwọ naanị iji nweta ya kama inye ya ikikere.
Omenala ngwanrọ chọrọ atụmatụ n'ihu. Ọ dịghị ihe ọhụụ ebe a, mana ọ bara uru icheta atụmatụ dị n'ihu na-ama ọkwa nke nsogbu nsogbu mgbe ngwanrọ anaghị eme dị ka atụ anya ya na ndị ọrụ na-enupụrụ ya isi.
Iku ma ọ bụ outsource gị Software Development?
Developmentlọ ọrụ na-emepe emepe sọftụwia bụ ọkachamara pụrụ iche, yana ijikọ ngwa ahịa azụmaahịa na -achọ azụmaahịa chọrọ usoro atọ dị iche iche. Mgbe ahụ, ihe mbụ ị ga - atụle bụ ego: Can nwere ike ị were ndị ọkachamara ndị a niile?
Maka agbakwunye, tụlee na nkezi ụgwọ nke onye na-emepe emepe NET, gụnyere uru, bụ $ 80,000 / afọ, ị ga-achọkwa ndị ọkachamara di na nwunye iji mechie otu gị. N'ụzọ dị iche, ịnyefe ọrụ gị na ụlọ ọrụ ngwanrọ na-arụ ọrụ nke ọma ga-efu gị ihe dịka $ 120 / awa, kesara Bob.
Isi okwu a bụ nke a, nhọrọ ị ga - ewu ma ọ bụ zụta ọ ga - eme ka azụmahịa gị bụrụ ihe pụrụ iche ma bụrụ ihe na - achọsi ndị ahịa ike, ma ọ bụ manye gị ịgbanwe ọrụ gị ka ọ dabara na sọftụwia?
Bob Baird, onye guzobere Ogwe-oghere
Tags: onye nzuzuiru ma obu zutantụgharị ihusoftware mmepe
ClickMeter: Ndepụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, Mgbakwunye Mgbakwunye, na Conchọgharị Ntugharị
TextMagic: Nzuzo Azụmaahịa Azụmaahịa Ederede (SMS)